June 23, 2021 361
बैशाख ५ गतेबाट शुक्र उदय भइसकेको छ । अब बैशाख २० गतेबाट शुक्रले मालभ्य राजयोग बनाउँदैछ । यो समयमा नसोचेको घटना हुन्छ । मागेका कुराहरु सबै पुरा हुन्छन् । १० राशिलाई अत्यन्तै शुभ छ जस्लाई हामीले चर्चा गरिसकेका छौं तर त्यो मध्ये पनि ४ राशिलाई राजयोग प्राप्त हुदैछ ।
Prev५ दिनमै मो’टोपन घटाउन र कि’ड्नीको सफाई गर्न अपनाउनुहोस् यी उपाय-
Nextआँचल शर्माले महानायक छोडेर आफुलाई रोज्दा पल शाहको यस्तो जवाफ (भिडियो हेर्नुस)
“भगवान गुणेशको दर्शन गरि पुष २८ गते/ जनवरी १२मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ राशिफल हेर्नुहोस”
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (44021)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13992)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13151)